यदि रणबीर सिंहले कण्डमको विज्ञापन गर्न बन्द गरेका छन् भने यसमा दीपिकाको के दोष ? - E ALL NEPAL
यदि रणबीर सिंहले कण्डमको विज्ञापन गर्न बन्द गरेका छन् भने यसमा दीपिकाको के दोष ?
एउटा खबर आएको छ, रणवीर सिंहले कण्डमको विज्ञापन गर्न बन्द गरेका छन् । विगत पाँच वर्षदेखि उनी एक कण्डम ब्रान्डसँग आबद्ध थिए । त्यतिबेला धेरै कुरा सार्वजनिक भएका थिए किनभने रणवीर सिंह यस्ता पहिलो बलिउड नायक थिए जसले खुल्ला रुपमा सुरक्षित यौनसम्पर्कबारे प्रचार गरेका थिए र जसले खुल्ला रुपमा कण्डमको विज्ञापन गरेका थिए । तर अब रणवीरले कण्डम ब्रान्डका लागि विज्ञापन नगर्ने कुरा आएको छ । रिपोर्टका अनुसार कण्डमको उक्त ब्रान्ड र रणवीरले सहमतीमा यस्तो निर्णय लिएका हुन् । अब यो निर्णय रणवीरले किन लिए, वास्तविक कारण के हो यसबारे केही थाहा छैन । एउटै कुरामात्र थाहा छ, अब उप्रान्त उनी कण्डमको विज्ञापन गर्ने छैनन् ।
ठिक छ, यो उनको मर्जी हो । केको विज्ञापन गर्ने, केको नगर्ने । उनका आफ्नै केही कारण हुनसक्लान् । तर भारतका धेरै मिडिया, अझ भनौं लगभग सबै मिडियाले आफ्नो रिपोर्टमा एउटा कुरा पक्कै लेखेका छन् । लेखेका छन्, ‘रणवीरले कण्डमको विज्ञापन नगर्ने निर्णय लिनुको पछाडि उनको विवाह र उनकी श्रीमती दीपिका पादुकोण हुनसक्छिन् ।’
यी रिपोर्टमा रणवीरले सायद यसको विज्ञापनका लागि धेरै पैसा माग गरेका थिए त्यसकारण उनको कन्ट्र्याक्ट समाप्त भएको हुनसक्ने पनि बताइएको छ । तर यो जुन दोस्रो कारण छ ‘धेरै पैसाको माग गरेका कारण’ यो हरेक मिडिया रिपोर्टले समाचारको भित्र लेखेका छन् । तर हेडलाइनमा ठूलो–ठूलो अक्षरमा दीपिका पादुकोण र रणवीरको विवाहलाई कारण बताइएको छ ।
यो कुरा बुझ्न मुश्किल छ कि आखिर दीपिकासँग विवाह र रणवीरले कण्डमको विज्ञापन नगर्नेबीच के सम्बन्ध छ ? यदि कारण स्पष्ट छैन भने केही सटिक जानकारी नभइकनै यो निर्णयको पछाडि दीपिकालाई किन कारण बताइँदै छ ? के विवाहपछि रणवीर समाजले चाहेजस्तै ‘संस्कारी’ भएका हुन् ?
रणवीरले एक अन्तरवार्तामा आफू सुरक्षित यौनसम्बन्धको प्रचार गर्न चाहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो देशमा हामी एचआईभी र एसटीडी (यौनजन्य रोग) को सामना गरिहेका छौं । मलाई लाग्छ कि यस्ता समस्या एउटै कारणको कमी हुने गर्छ र त्यो हो कण्डम । र यसको विज्ञापन हुनुपर्छ । म सधैं आफूसँग कण्डम बोकेर हिँड्ने गर्छु । र यदि कोही पुरुषले यस्तो गर्दैनन् भने उनीहरुले पनि यो तरिका अपनाउनुपर्छ ।’
यो कुरा रणवीरले पाँच वर्षअघि भनेका थिए । जुन वास्तविक थियो । पाँच वर्षपछि यदि रणवीरले कण्डमको विज्ञापन गर्न चाहेनन् भने त्यसमा दीपिकालाई किन जबरजस्ती तानिएको छ ? अन्य विभिन्न कारण पनि हुनसक्छन् ।